Ukuphupha ngemithwalo Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Sihlala sihamba nohambo kunye nemithwalo. Kuxhomekeke kubude bexesha lokuhamba, le inokuba sisiqwenga esinye okanye ezingaphezulu zemithwalo kwaye iqulethe yonke into ebalulekileyo kuthi nesiyifuna ngokupheleleyo.
Kwiholide yosapho, phantse iyinxalenye yento yokuba iziqwenga zemithwalo kufuneka zibekwe esiqwini ngomzamo omkhulu. Ngamanye amaxesha umthwalo wethu unokuba nzima kakhulu kuthi kwaye sidinga uncedo ngawo. Iitroli ezisebenzayo ezinamavili zinceda ukumelana nemithwalo emikhulu kunye nenkulu xa sihamba ngokungxama kwisitishi sikaloliwe okanye kwisikhululo seenqwelomoya ukuze sihambe njengomkhweli.
Kodwa lithetha ntoni iphupha "imithwalo"? Kutheni kubonakala kuwe ephupheni? Kuthetha ukuthini ukubonisa? Cinga ngento oyithathileyo nawe ephupheni kwaye ujonge ezi phawu zamaphupha kwisichazi magama sethu esichazayo.
Ukutolikwa kwesimboli yephupha, iimeko ngqo ephupheni zithatha isigqibo: Ngaba wayephethe imithwalo? Ngaba ukhe wahamba nemithwalo okanye mhlawumbi ubungenayo nangona uye waya eholideyini? Iimeko eziqhelekileyo zamaphupha ezijikeleze isimboli zichazwe apha ngezantsi:
1 Uphawu lwephupha «Impahla»: eyona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
1.1 Ipakishwe kakhulu: thwala imithwalo ngokuchazwa kwamaphupha.
1.2 Iphupha lokuhamba nomthwalo
1.3 "Unozinti" njengophawu lwephupha
1.4 Xa umthwalo ulahlekile kuhambo lwamaphupha
1.4.1 Ukuhamba ngaphandle kwemithwalo: lithetha ntoni eli phupha?
1.4.2 Iphupha lokulibala umthwalo wakho, owu!
1.4.3 Shiya umthwalo wakho okanye ulahle ephupheni ...
2 Uphawu lwephupha «imithwalo» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «imithwalo» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «imithwalo» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «Impahla»: eyona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
Ipakishwe kakhulu: thwala imithwalo ngokuchazwa kwamaphupha.
Ukuphatha umthwalo ekuchazeni amaphupha kuhlala kungumqondiso wexhala kunye neengxaki. Ubunzima bomthwalo ophuphileyo, kokukhona unokuchaphazela umntu oleleyo. Uyazilibala iinkxalabo zabanye abantu. Kwangelo xesha, awungekhe ukhule ngokukhululekileyo kwaye ujonge kwinto ebalulekileyo.
Iphupha lokuhamba nomthwalo
Amaphupha okuhamba nemithwalo ahlala ekuvumela ukuba wenze izigqibo malunga nobuntu bakho. Ke ngoko, zingumqondiso wohambo oluya kuye. Kuthatha isigqibo sokuba umntu olalayo uyephi ephupheni kunye nezinto anazo naye. Ukusuka apha kunokugqitywa ngokubaluleke ngakumbi ebomini kunye nokuba zeziphi izinto kunye namaxabiso afanelekileyo asikhokelayo.
"Unozinti" njengophawu lwephupha
Ngokwenkcazo yephupha, umthwalo weebhayisikile kufuneka ulungiselele imiceli mngeni elandelayo. Ayizizo zonke izinto eziya kuhamba njengoko umntu oleleyo ecwangcisiwe kwaye enethemba lekamva elizayo. Nangona kunjalo, ngoncedo olufanelekileyo, unako ukusombulula iingxaki kwaye woyise ubunzima.
Ukuba, kwelinye icala, umntu uthathwa njengophethe umthwalo womhambi, umphuphi kufuneka acinge malunga nokuba ulandela ngokwaneleyo na iimfuno zakhe. Mhlawumbi ngoku baphila ngakumbi kwabanye kunokuba bazenzele.
Xa umthwalo ulahlekile kuhambo lwamaphupha
Ukuhamba ngaphandle kwemithwalo: lithetha ntoni eli phupha?
Ngubani ophupha iholide ngaphandle kwempahla, ulangazelela inkululeko. Oleleyo ufuna ukuzikhulula kwiinqobo zezinto ezibonakalayo, iimfuno zangaphandle kunye noxanduva. Ungaziva ngathi awungekhe uqhubeke ngoku ngeli xesha, uziva ubanjwa ziinkalo ezithile zobomi bakho.
Iphupha lokulibala umthwalo wakho, owu!
Amaphupha apho ufumanisa ukuba uyilibele imithwalo yakho ngokwesiko ibonisa ubunzima kubomi bosapho. Kukho umngcipheko weengxabano, mhlawumbi nokuphela kobudlelwane neqabane. Kwakhona, iphupha lemithwalo elityelweyo liyalumkisa ukuba uyikhathalele ngcono imali yakho. Ngaphandle koko, kunokwenzeka ukuba ilahleko zoqoqosho azinakuphinda zihlawulwe kwixesha elide.
Shiya umthwalo wakho okanye ulahle ephupheni ...
Ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha, iisutikheyisi luphawu lobuntu obandisiweyo bephupha, lubonisa iitalente kunye neenjongo zobomi. Ukuba imithwalo ishiye ngasemva okanye ilahlekile ephupheni, ezi zinto zinobuntu zinokusongela ukunciphisa okanye ukungahoywa. Ukuba uzibona ukwiphupha ngaphandle komthwalo, awuzukuthwala mthwalo kuwo el mundo yeewotshi. Oku kuthetha ngakumbi 'iisayithi ezingcolisekileyo' ezivela kwixesha elidlulileyo.
Uphawu lwephupha «imithwalo» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha, uphawu lwephupha "umthwalo" ufuzisela ubuntu obandisiweyo ukulala, ke amandla akho, iitalente, umxholo wobomi kunye nezicwangciso. Ke ngoko, umphuphi akufuneki aphulukane nemithwalo yakhe ephupheni, kuba oko kuya kuyishiya inxenye yakhe.
Ukuba ukuphupha uzibona unemithwalo engaqhelekanga ephupheni, oku kukuthi, ngokwenkcazo ngokubanzi yephupha, into ebonisa ukuba ukuphupha kuthwala umthwalo okhethekileyo kwihlabathi elivukayo. Lo mthwalo unokuba yimvakalelo okanye enye. Mhlawumbi ukuphupha kuneemfuno eziphakamileyo kakhulu kuye okanye kwabanye.
Umothuko ovela kwixesha elidlulileyo unokuqondwa nangalo mfanekiso wephupha; Umphuphi kufuneka acinge kube kanye malunga nokuba ngaba isiganeko sokugqibela senzekile kuye njengomntwana, ekunokubakho uloyiko kulo. Oko kunokuba "ngumthwalo" ngengqondo yomthwalo umntu awuthweleyo naye.
Ukuba iphupha linengxaki yokulawula izinto zakho ephupheni, ungayenza nakwilizwe elivukayo. ingxaki okanye kukho izinto ezingathandekiyo endlwini. Oku kunokukwazi ukuqonda kuphela ubunzima okanye ingozi. Imithwalo enzima okanye engaphephekiyo ephupheni ifanekisela imithwalo yemvakalelo yokuphupha ngayo, kodwa kunye neengxaki ezingafunekiyo azifakele kuzo.
Ukuba iphupha lixakekile liphethe imithwalo yakho ephupheni, ukutolikwa ngokubanzi kwephupha ngalo mfanekiso wephupha kukubonisa ukuba uphethe amaxhala amaninzi ebomini bokuvuka. Nangona kunjalo, ngenxa yoko, wazilibala inkxalabo kunye neemfuno zabanye abantu. Isimboli yamaphupha ikwacebisa ukuba kufuneka utshintshe indlela oziphethe ngayo apha.
Ukuphulukana nomthwalo wakho ephupheni kutolika ukutolikwa ngokubanzi kwephupha njengophawu lokwehla. Ukulwa ngaphakathi kusapho. Ngabantu abahlala njengesibini, le meko yamaphupha nayo inokuchazwa njengophawu lokwahlukana. Ukuba umntu khange akwazi ukulungisa umthwalo wakhe kwaye kwafuneka aqale uhambo ngaphandle kweempahla ezibalulekileyo okanye ezifanayo, iphupha elo linokuba neengxaki notshintsho ebomini bakhe.
Ukuba kukho into ewayo kwisutikheyisi yakho ngelixa uphuphayo aze omnye umntu ayibuyisele kuwe, uyakufuna uncedo lwabanye abantu kwihlabathi elivukayo kunye neeprojekthi ezizayo. Ukuba iphupha lifumana uncedo komnye umntu, umzekelo iphepha, kunye nemithwalo yakhe ephupheni aze lo mntu aphume emthwalweni, le meko yephupha ibonisa ukonakala komcimbi othetheleleka kukungathembeki kwamaqabane iphupha.ukuvuka kwehlabathi.
Uphawu lwephupha «imithwalo» - ukutolikwa kwengqondo
Ukusuka kwindawo yokujonga kwengqondo, umthwalo ephupheni ufuzisela ulwandiso Iimpawu zomntu yokuphupha. Oku kunokuqondwa ukuba kubandakanya amandla akho kunye nokukwazi kwakho ukusinda kuhambo lobomi ngokukhuselekileyo. Phantsi kweemeko, iphupha ligxininiswa kwihlabathi elivukayo, ke uphawu lwephupha "umthwalo" unokutolikwa njengezicwangciso okanye iimvakalelo ekufuneka iphupha lizishiye ngasemva.
Ukuba iphupha liphulukana nesiqwenga esinye okanye nangaphezulu ephupheni, ukutolikwa kwengqondo kwephupha kulitolika njengokulahleka kwamandla e-psychic. Ingabonisa isifo. Kungcono kwi-downshift.
Uphawu lwephupha «imithwalo» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwamaphupha okomoya kutolika uphawu lwephupha "imithwalo" njenge ixesha elibuhlungu ngokuphupha. Kodwa nje ukuba ulahle umthwalo wakho, la maxesha angadlula ngokukhawuleza.